Tooftaa hundi olhantummaa jabeessuufii – Gubirmans Publishing
Posted on May 9, 2014 by bgutema
Kan du’an akka dabaankufootaatt bakka boqonnaa saanii dhumaa jiru, kan jiraa du’anii, kanneen madaawanii fi firooti yeroo kana mana hidhaa faalamaa keessa bakka itt gad ciisanillee hin qabne fi qaamaa fi sammuquwiin guraaramaa, gudeedamaa; reefa waan hin arganneef abaa fi haadhaa fi akaakayyuu imimmaan roobsaa jiran gidiraan saan itt fufee jira. Kan gara milli isaan geessett baqachuun hamaa caalaatt,. o’aa, qorra, bokkaa fi bineens dagalaatt saxilamaa jiranis ni argamu. Sun hundi gatii birmadummaaf gaafatamu. Hamma yoomiitt laata Oromoon kan qaanii akkasii baatee ta’u? Hamma sabichi harka walqabatee ka’uun ba’aa saa ofirraa hin fonqolchinett gadadoon Oromoo hin raawwatu. Ummata itt roorrifame qofa kan balaa koloneeffataa albaadhess kanaan dhufu dhaabuu danda’u. Dhigii barattoota, angafootaa fi kurkrtuu saanii didhaa itt bulchee fana dhooftuu gara bilisummaatt geessu isaaniif haa ta’u. Koloneeffataaf akeekii duroomaa fi dagaagina argachuu dha. Gaaga’amtootaaf garuu akeeki saanii bilisummaa fi kan dhaban deeffachuu dha. Kan ta’e kun tooftaa diinaa keessaa tokko. Tooftaa hundi olhantummaa jabeessuu dha.
Akeeki koloneeffataa qabeenya waatattaa fi humna namaa kolonootaa ittisa malee bolquu dha. Sanaaf mala argachuu danda’u hundaan koloneeffamaa jilbeenfachisuuf tattaafata. Yeroo amma TPLF qooda sana fudhachaa jira. Caasaan federaalaa fulduree qofaa. Herrega kamiinuu Itophiyaan ammallee empayera kolonummaati. Humna buubaa,lammii biyyaa haqanii baasuu, deegsa, goolii, fi dorsisi tooftota mancaasaan fedha saa bakkaan gahuf dhimma itt bahu. Danuun seenaa akka Oromoon walitt bu’a wal hin madaalleen injifatamu tolche. Oromoon akka Habashaan keessaayyuu TPLF haxiixaa meetra dhibbbaa malee kan karaa dheeraa akka hin taane beekaa; hamaaketa malee qeeransa mitii. Qeerransichi gurraachii kan hamaaketi ajjeeffatte yeroon ka’ee irraa buufatu fagoo hin ta’u. Barri bulcha goolii fi fixiqacee koloneeffataaa hamma Oromoon kan saamame deeffachuuf murannoon walga’ee ka’utt qofa tura. Koloneeffatoo hundi akka Oromiyaan hoggana roga qabu hin baafanne gochaa jiraatani. Adamsanii qoomaa yk boojuu harkatt kufe ajjeesaa turani. Kan hafan biyyaa bahan yk hidhaa gaarreen Habashaa irratt dhumani. Kanneen biro hordoftoota saanii kumkumoota waliin garbummaan gurguraman. Sun ammayyuu tooftaa too’annoo fi gabbarsiisa saaniitii. Oromoon cookkoo saa gochuu dhaa, kan qabu jajjabeesssaa qoree saanii dhoqqee keessaa saxiluutu irra jira.
Bulchooti itt haananii dhufan akka ilmaan Oromoo takkallee too’annoo saanii sammuu fi qaamaa alatt hin guddanne mirkaneeffataa turani. Oromoo hundi eenyummaaa ofii gatanii kan koloneeffattuu akka fudhatan dirqisiifamaa bahan. Kan qaban hunda dhabanii afaan saanii, aadaa saanii, fi amantee saanii maqaan dhuunfaallee utuu hin hafin gad dhiisisani. Lammooti koloneeffataa gadadoo ummataa utuma arganii sun hundi dagaagina saanii kan calaqisuu ta’uun madaqfamanii. Kan isaan ilaalcha hunda caallaatti dhandhoonamanii hafan akka san ta’eetu. Sanaaf malee gocha bu’aa caalaa badiisi itt fidu hin dhiiban turani. Goolii, haqa lammii fi deegsi akkasii hamma jarri yartuun quba saanii keessaan miliqxe dammaqina malbulchaa guddifattee nakkaruu eegaltett itt fufee ture. Jarri yartuun kun seerawummaa sirnichaa gaaffii jala oolchuun hunda malalchiifte. Sun mootummaa abbaa gonfoo fi gola kumunistii loltuu, gola sabaawaa Tigraawayiin bakka buufame finqilchuu gargaaree ture.